Zvemagetsi zvinodiwa zvemuchina zvikamu uye zvikamu - Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co LTD.
Unyanzvi zvinodiwa zvemuchina zvikamu uye zvikamu
Maitiro ezvekugadzirisa zvikamu inzira yekushandura chaiko kutaridzika kwezvinhu zvakasvibirira kuti zviite semi-apedza kana akapedza zvigadzirwa. Izvi zvinodaidzwa kunzi tekinoroji. Iyo ndiyo bhenji yezvikamu zvekugadzirisa uye kunyatsoita zvemishini zvikamu zvinogadzirisa. Maitiro acho akaomesesa.
Iyo yekumisikidza maitiro mabenchimendi eakarurama michina zvikamu zvinogona kuganhurirwa muzvikamu zvinoenderana nemaitiro akasiyana: kukanda, kuvaka, kutsika, kutungidza, kupisa kupisa, machining, gungano, nezvimwe. Inoreva izwi reruzhinji rwechikamu chose cheCCC machining uye gungano remuchina. maitiro. Zvimwe zvakaita sekuchenesa, kuongorora, kugadzirisa midziyo, zvisimbiso zvemafuta, nezvimwe zvinongova zvebetsero maitiro. Iyo yekushanduka nzira inoshandura iyo yepamusoro nzvimbo yezvinhu zvakasvibirira kana semi-apedza zvigadzirwa. Iyo CNC michina yekuita muindastiri ndiyo huru maitiro.
Contour kugadzirisa kwezvikamu
1. Iyo isingamisirwe chimiro kushivirira inofanira kusangana nezvinodiwa zveGG1184-80.
2. Iko kutendeuka kunotenderwa kweasina kumiririrwa kureba dhayeti iri ± 0.5mm.
3. Hapana fillet nharaunda R5.
4. Ose asina kuzadza chamfers ari C2.
5. Rekona rakapinza rinofungidzira.
6. Rutivi rwakapinza harufadzi, uye burr uye kupenya zvinobviswa.
Surface kurapwa kwezvikamu
1. Hapafanire kuve nekukwatuka, abrasions uye zvimwe zvinokanganisa zvinokuvadza kumeso kwechikamu.
2. Iko pamusoro peiyo yakagadziriswa tambo haitenderwe kuve nehurema senge ganda dema, mapundu, mabhatani asina kujairika uye mabhureki. Usati wapenda pamusoro penzvimbo dzese dzesimbi dzinoda kupendwa, ngura, oxide sikisi, mafuta, guruva, ivhu, munyu uye tsvina zvinofanirwa kubviswa.
3. Usati wabvisa ngura, shandisa organic solvent, lye, emulsifier, steam, nezvimwewo kubvisa girisi uye tsvina pamusoro pezvikamu zvesimbi.
4. Nguva yenguva iri pakati pechiso inofanirwa kuvezwa nekupfura nenyunje kana manyorerwo enzira uye iyo yekutanga kuputira haifanire kudarika 6h.
5. Idzo nzvimbo dzezvikamu zvekusangana dzinosangana pamwe chete dzinofanirwa kuvezwa neanti-ngura pendi ine ukobvu hwe 30-40Î¼m usati wabatana. Makumbo emakumbo anofanirwa kuvharwa nepende, putty kana kunamatira. Iyo yekutanga yakakuvadzwa nekugadzirisa kana kusanganisa inofanira kupendwa zvakare.
Sarudzo yemidziyo inofanirwa zvakare kuve inonzwisisika uye yakarurama. Kukwikwidza kunofanirwa kuitiswa pane yakakwira-simba muchina chishandiso, nekuti icho chikuru chinangwa ndechekugura mizhinji yemachining mvumo, uye iko kurongeka zvinodiwa hazvisi zvakanyanya. Nekudaro, kuti igadziriswe zvakanaka, yakakwirira-chaiyo michina maturusi anodikanwa ekugadzirisa. Sarudzo inonzwisisika yematurusi emuchina haigone chete kuve nechokwadi chekugadzirisa, asi zvakare kuwedzera hupenyu hwebasa remuchina.
Maitiro acho mabhenji ekunyatso gadzira michina yezvikamu zvinoshandiswa zvinosanganisira mabhenji ekumisikidza, ayo anoshandiswa nemalanzi kana zvigadziriso kana uchitsvaga pane CNC lathe. Chiyero chekuyera, ichi bhenji chinowanzoreva saizi kana nzvimbo zviyero zvinoda kucherechedzwa panguva yekutarisa. Assembly datum, iyi datum kazhinji inoreva kune chinzvimbo chinzvimbo chezvikamu panguva yegungano.
Ita michina zvikamu zvekugadzirisa zvinofanirwa kuziva zvinhu